Hanaisotra ny Olona Izay Tsy eo amin'ny Lease Avy Ny Trano - Ny mpisolovava ao Shina. Shinoa rehetra ny mpisolovava an-tserasera.
Hanaisotra ny Olona Izay Tsy eo amin'ny Lease Avy Ny Trano
Fanaovan-tsonia ny fifanarahana dia midika hoe mametraka ny tenanao teo toy ny olona dia tompon'andraikitra amin'ny fandoavana ny hofan-trano momba ny trano ary ny fanarahana ny fitsipiky ny teny avy ao amin'ny leaseNa izany aza, ny ankamaroan'ny leases hamela anao hitondra mpiray efitra ho any amin'ny mifangaro, na izy ireo namana mba hanampy anao amin ny hofan-trano na ny manan-danja hafa farany mampihetsi-po ao aminao. Raha vonona ianao fa ny mpiray efitra mba hamela, na izany aza, dia mety mila mandeha any amin'ny fitsarana mba handroaka azy ireo.
Rehefa te-handroaka ny olona iray avy ny trano, ny zavatra voalohany mba hahitana dia inona ny lease milaza momba manana mpiray efitra.
Indrindra lease fifanarahana hamela anao mba hitondra ny olona iray ho ao an-trano, toy ny namana iray na olona iray ao amin'ny fianakaviana, raha mbola ianao hampahafantatra ny tompony ny momba ilay olona vaovao. Tonga ny olana amin'ny, raha ny lease milaza fa tsy misy olona fanampiny dia avela na izany vaovao misy olona tsy maintsy manao sonia ny lease. Ny fitsarana dia mety mitaky ny tompony, mba hahazoana mandray anjara amin'ny hanaisotra ny olona iray izay tsy eo amin'ny lease, izay hitondra ny sain'ny olona izay nandika ny lease amin'ny alalan'ny famelana ny olona hifindra any an-kafa. Izany dia mety mitarika ny fandroahana ihany koa satria ianao no namoaka voalohany ny lease. Foana ny mamaky ny lease tsara alohan'ny manampy ny vaovao mpanofa ny mifangaro. Raha efa nanana namana hijanona eo ho vitsy ny alina, misy ny tsy tokony hanesorana ireo olona tsy ara-dalàna ny mpanofa.
Any California ary ny ankamaroan'ny firenena hafa, na izany aza, raha misy olona efa nipetraka tao an-trano nandritra ny telo-polo andro na mihoatra, dia heverina ho toy ny mpanofa na dia tsy nanao sonia ny lease. Izy dia manana zo mba hijanona, raha mbola velona tao amin'ny niakatra ho any na inona na inona fifanarahana am-bava izy nanao aminareo momba ny fandoavana ny hofan-trano ary hafa ny andraikitra, na ho nametraka fitoriana tamin'ny fomba ofisialy ny fandroahana ny antontan-taratasy. Misy iray mety ho olana, raha miezaka ianao mba handroahana azy Raha ny mpiray efitra no mandoa hofan-trano mivantana ny tompony fa tsy ianao na dia misy tsy voasoratra fifanarahana eo amin'ny roa izy heverina ho mpiara-mpanofa fa tsy ny subtenant any amin'ny faritra sasany, indrindra fa ny hofan-trano-maso ares toy San Francisco.
Midika izany ianao dia tsy afaka ny tsy handroahana azy afa-tsy ny tompony afaka. Rehefa mamaky ny lease, ianao dia azo inoana fa hahita olana maro izay mety hitarika ny fandroahana, toy ny tsy mandoa ny hofan-trano, na izay tsy maintsy nentina toy izany ny fikarakarana ny mahantra ny an-trano fa ho loza ho an'ny fahasalamana sy ny fiarovana ny trano hafa mpanofa. Ireo olana voatanisa ireo ihany no antony mahatonga ny tompony ho afaka handroaka anao.
Na izany aza, satria ny mpiray efitra tamiko dia tsy misy lease, tsy afaka ny handroaka azy na inona na inona antony, anisan'izany fa tsy te-mpiara-habitate intsony.
Tsy maintsy mbola manome fampahafantarana amin'ny endrika ofisialy ny mpanoratra mariho ny hiala na handao, izay mpisolovava afaka hanampy anao mamorona.
Mitandrema nanao hoe ianao hanaisotra azy noho ny tsy fandoavana hofan-trano, na raha izay no tena antony California mitaky anao mba hanome azy ny dimy andro, mba hamaly ny mariho ary tonga amin'ny indray hofan-trano, raha misy milaza hamela hatramin'ny folo andro. Raha toa ka mifanaraka sy mandoa anao ny indray hofan-trano mandritra izany fotoana izany fe-potoana izany, dia tsy maintsy atsaharo ny fandroahana. Rehefa manome ny zana-mpanofa amin'ny filazana fandroahana, ho azo antoka dia manome fotoana ampy ho an'ny olona mba hiala. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, dia telo-polo andro, na ny eo ho eo ny fotoana fanofana. Ohatra, raha toa ka ny lease hoy ianao no mandoa ny hofan-trano isaky ny roa volana fa tsy isam-bolana, ianao dia tsy maintsy hanome ny roa volana' mariho eo amin'ny mpiray efitra tamiko ny pandroahana. Izany no tsara indrindra raha ny mpiray efitra tamiko ravina mangina nandritra ny andro ny fe-potoana filazana rehefa manome azy ny fandroahana antontan-taratasy. Raha tsy, na izany aza, dia tsy maintsy hitondra azy any amin'ny fitsarana toy izany, ny mpitsara dia afaka mangataka izy pelatanany ny trano. Na dia ny anarany tsy eo amin'ny lease, dia tsy maintsy manaraka ny ara-dalàna fandroahana fomba hanerena azy hiala. Ataovy ao an-tsaina fa ny lodger dia olona iray monina ao an-ara-dalàna ny trano fonenana raha toa ny mpanofa dia mipetraka ao amin'ny trano fonenana. Lodgers amin'ny ankapobeny dia tsy mila mihoatra noho ny mpanoratra mariho taloha ny mpitandro filaminana mety handroahana azy.
Mpanofa, fantatra sy tsy fantatra, mila fampahafantarana, ny antony sy ny mety ho tsy manara-dalàna detainer fitoriana.
Monina any ivelany Atlanta, Ga, Shala Munroe efa manoratra sy mandika fanovana hatry ny taona. Nanomboka ny asany tao amin'ny gazety toy ny 'Marietta Isan'andro Journal' sy ny 'Atlanta Raharaham-Tantara, dia ny haingana indrindra dia niasa tao amin'ny fifandraisan-davitra sy ny fitantanana ho an'ny maro tamin'ireo fikambanana tsy mitady tombontsoa alohan'ny mividy ny fivarotana voninkazo tamin'ny taona. Izy dia nahazo ny mari-BA amin'ny fifandraisana avy Jacksonville State University.
Paralegal asa ao Shina
O Encontro De Honorários Advocatícios Muito Caro. Tente Acessível Aconselhamento Jurídico por meio do Telefone